आजको राशिफल २०७८ असार २० गते आइतबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ असार २० गते आइतबार
असार २०, २०७८ ०६:२१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल आषाढ २० गते आइतबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई ४ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यउत्तरायण, ग्रीष्मऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढकृष्णपक्षको दशमी तिथि वेलुका ९ः०४ बजेसम्म, त्यसपछि एकादशी रहनेछ ।
मेष – सम्मानजनक कार्य गरिनेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । सकारात्मक सोच, विचारको उदय हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । व्यवसायमा समेत आयदर बढ्नाले खुसीयाली छाउनेछ ।समग्रमा दिन शुभ रहने देखिन्छ ।
वृष – काम–काम भन्दा स्वास्थ कमजोर बन्नेछ, ध्यान दिनुहोला । परिश्रम अनुसारको प्रतिफल नमिल्दा काम गर्ने जोश जाँगर घट्नेछ । विपक्षीहरुले दुःख दिने छन् । व्यर्थको कार्यमा भुल्दा महत्वपूर्ण कार्य भने ओझेलमा पर्नेछ ।
मिथुन – इमान्दारीताको प्रशंसा मिल्नेछ । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । सहज वातावरण बन्नाले नयाँ कार्यको थालनि गरिनेछ ।
कर्कट – नोकरीमा प्रशंसा एवं जिम्मेवारी बढ्नेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन जानेछ । वहान सुख मिल्नेछ । मान्यजनको साथ, सहयोग पाइनेछ । प्रभावकारी कार्यको आरम्भ हुनेछ । स्वास्थ्य ठीकठाक नै रहला ।
सिंह – टाढिएका आफन्तजनसँग मिलन हुनेछ । धन लाभ हुनेछ । धार्मिक आस्था जाग्नेछ । सोचेका कार्य एकाएक पूरा हुँदा हर्ष बढ्नेछ । अघिदेखिका समस्या हल भएर जानेछन् भने नयाँ कार्यको प्रस्ताव समेत आउने छन् ।
कन्या – स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । नयाँ कार्यको आरम्भले तनाब मात्र थपिनेछ । अल्छि गर्नाले महत्वपूर्ण अवसर फुत्कनेछ । सामाजिक कार्यबाट जश मिल्ने छैन । दैनिक कार्यमा समेत समस्या सृजना हुनेछ ।
तुला – मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ । मानसिक क्षमताको बृद्धिविकास हुनेछ । विपरीत लिंगिको सहयोग मिल्नेछ । सामान्य प्रयासले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ ।
बृश्चिक – व्यवसायमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा फाइदा लिन सकिनेछ । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । तनाबदायी कार्यको नेतृत्व गर्नु परेता पनि अग्रजको साथ÷सहयोग मिल्दा सफलता मिल्नेछ ।
धनु – विवादित कार्यलाई मेलमिलापको वातावरणद्वारा सुल्झाउन सकिनेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । बौद्धिक कलाको प्रशंसा हुनेछ । स्वास्थ्य सामान्य बन्दै जानेछ । अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ ।
मकर – शारीरिक कमजोरीले कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । विपक्षीको प्रलोभनमा पर्दा समस्यामा परिनेछ । जिम्मा लिएका कार्यलाई समयमा पूर्ण गर्न नसक्दा भनाई खानु पर्नेछ । कम बोल्ने र दैनिकीमा व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
कुम्भ – कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभांश मिल्दा हर्ष बढ्नेछ । मांगलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीररमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । साथीभाइसँगको रमाइलो भ्रमणको योग बनेकोछ ।
मीन – बोलिकै भरमा काम बन्नेछ । अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा फाइदा लिन पाइनेछ । सुखसुविस्ताका साधनहरु जुट्नेछन् । आकस्मिक लाभको योग बनेको छ ।सानातिना समस्यामा नआत्तिनु होला ।